Ihe nile banyere anthurium transplant n'ụlọ - site na A ruo Z - Mkpụrụ ubi - 2020
Anyị na-ewu akwụ maka epiphyte: esi akụ Anthurium n'ụzọ ziri ezi
Anthuriums "Anụ ọhịa" na oke mmiri dị egwu na-eguzo n'elu osisi, otu onye nwere ike ikwu, akwu na nkume, na olulu nwere oke ala n'ebe ahụ.
Ya mere, usoro mgbọrọgwụ ha nwere nkọwa nke ya.
Mgbọrọgwụ ndị a na-aga n'ala, na-enwe afọ ojuju na obere ego ya - mana ha na-ejikwa ụgbọ elu.
Dabere na atụmatụ ndị a, bulie akpa ahụ, ala na usoro ịkụ anthurium.
Osimiri ahụ kwesịrị ịhụ na nha ala na okpomọkụ dị jụụ. Maka nke a, họrọ plastic igbe.
Na ala ga-enwe oghere drainage nke zuru ezu ka mmiri wee ghara ịchọta.
Ihe miri emi na-adighi adighi nma maka mgbọrọgwụ na-etowanye ma n'akuku elu ma n'elu.
N'ime obere pots, akwa drainage oyi kwesịrị iwepụta oke nke olu.
N'aka nke ọzọ, obosara nke tank ahụ na-adabere na ihe a na-atụ anya ya site na anthurium: n'ime ọkwa dị oke mkpa usoro mgbọrọgwụ ga-etolite ma ọtụtụ ụmụ ga-apụta, ma okooko ahụ ga-ebelata n'ụzọ dị ukwuu. Otu esi eme ka oge ntoju, ị ga-amụta ebe a.
N'ime nnukwu ite, osisi ahụ agaghị enwe ike imeri ngwa ngwa na usoro ọgwụgwọ.
N'ihi ya, n'ihi na ndị okenye anthuriums na-ahọrọ ihe ndị nwere plastik dị ala nwere dayameta site na 24 ruo 32 cm.
Uzo mara oke ala nke osisi: akwa, ụbụrụ, na ezigbo ikuku na mmiri permeability, ubé acid.
Ndị dị otú a njikere ala maka orchids na bromeliads, nakwa maka ndị isi.
E nwere ike ịkwadebe ngwakọta ala. naanị m.
Lee ụfọdụ ụzọ kwesịrị ekwesị:
ala (sod) ala, sphagnum moss ma ọ bụ peat na nha nhata na mgbakwunye nke iberibe unyi na coconut fiber;
peat, chopped sphagnum, ala sod na ruru 2: 2: 1;
okpukpu ala, peat, ájá dị oke nhata na 2: 2: 1 na iberibe unyi na ogbugbo nke osisi coniferous;
edere ya na mkpanaka osisi, sphagnum sparm, ala ọma jijiji (2: 1: 1) na obere ego nke nri ọkpụkpụ;
ezi ụrọ gbasiri ike, peat fibrous, ogbugbo ogwu na nha nhata.
Tupu ịwụda na ala nke akpa ahụ, a ga-enyerịrị ya drainage (ụrọ buru ibu, obere ube, brick batrị na iberibe unyi), nke na-ewe ihe ruru otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ite.
A na-awụpụ ájá ájá n'elu drainage drainage, mgbe ahụ, a pụrụ itinye usoro mgbọrọgwụ - mma ya na ala.
E kwesịrị ichebara nlebara anya anya n'ọnọdụ ahụ mfe mgbọrọgwụ ma jiri nlezianya kpochapụ ebe ndị mebiri emebi na ebe ndị e mebiri emebi, na-ekesa ebe ndị ahụ merụrụ ahụ na -ezere unyi.
I nwekwara ike na-emeso ha ihe na-eme ka onye na-akpali akpali.
Mgbe ahụ jupụta na mmiri a kwadebere, na-agbalị nwetakwuo eto eto eluma jiri ya akara ya akara. Mkpụrụ mgbọrọgwụỊnọgide n'elu ga-ekpuchi sphagnum ma na-ehicha ya mgbe niile.
Ọtụtụ mgbe mgbe ị na-akụ ihe ị chọrọ iji lekọta nkwado osisi.
Ihe nile gbasara nlekọta anthurium, nakwa ihe pests na ọrịa nwere ike imerụ osisi a, ị nwere ike ịchọta na weebụsaịtị anyị.
Ọ bụrụ na anthurium na-eto site na mkpuru osisi, a na-atụgharị ya na ite dị iche iche na ntaneti 7 ruo 9 cm. ke ini utọ na nyocha nke ise na isii epupụta na n'ọdịnihu ha gbanwere "ulo" kwa afọ, ka ha na-etolite. Banyere ụzọ ndị ọzọ, ma e wezụga maka mkpụrụ, gbanye osisi a, gụọ ebe a.
A na-ebugharị osisi ndị toro eto kwa afọ abụọ ruo afọ atọ. Mgbe a na-atụgharị ha, ha na-agbalị ime ka mgbọrọgwụ dị elu karịa ntakịrị nke o mere n'ime ite ochie ahụ. Akuku fọdụrụ nke mgbọrọgwụ dị n'elu bụ ọbọp na sphagnum. Otutu mmụba na drainage.
N'oge a naghị emegharị mkpụrụ osisi ahụ.
Akara nke ite ọhụrụ ahụ na-ekpebi ma osisi ga-oge ntoju predominantly ma ọ bụ tumadi-eto eto. Ọ bụrụ na ị pụtara oge ntojuA na-atụgharị anthurium n'ime ite, ọ bụghị nke dị ukwuu karịa nke gara aga.
N'elu ite buru ibu, anthurium na-etolite etolite, na-enye ya osisi. N'oge opupu ihe ubi, mgbe ụmụ a malitere mgbọrọgwụ ha, n'oge a na-atụgharị ha, ha na-anọpụ iche site na isi osisi nọ ọdụ na ike dị iche iche kwekọrọ na mmepe ha.
Mgbe ịzụrụ Ihe atụ ọhụrụ kwesịrị nlezianya nyochaa ala na akpa. Ọ bụrụ na a na-emepụta ite mmiri na anthurium na mmiri, a ghaghị ịmepụ osisi ahụ kpamkpam site na ala ma gbanwee ozugbo.
N'ihe banyere ịgha mkpụrụ nke mbụ tupu ire ere ahụ, a na-atụgharị osisi ahụ na clod earthy n'ime ite nke ọ bụghị nnukwu dayameta.
N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesịrị ileba anya ichebe usoro mgbọrọgwụ ma, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mee ka ọ dịkwuo mma na nkocha na-egbuke egbuke na ihe na-eme ka onye na-akpali akpali.
Mbido nke ọ bụla bụ nrụgide maka osisi ahụ. Ya mere, site na "ndị ọbịa" ekwesịghị ịtụ anya na ọganihu buru ibu ma ọ bụ ọganihu dị egwu n'akụkụ niile. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji nye ha ọnọdụ dị mma maka mmepe na inye oge maka mmegharị ka "ọhụrụ" ọhụrụ ahụ.
Anthurium, ọ bụ ifuru nke "obi ụtọ nwoke," kama ọ dị mgbagwoju anya na omenala ụlọ, Otú ọ dị, o nwekwara ike ịmepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Otu n'ime ọrụ ndị dị na nke a bụ iji hụ na mmepe nke usoro mgbọrọgwụ.
Tinye ya na ebe mara mma, gbakwunye ịgbara, ọkụ, okpomọkụ, iru mmiri - na "obi ụtọ nwoke" ga-eto, oge ntoju ma mụbaa.
Ọzọ, ị ga-ahụ foto nke nlekọta n'ụlọ maka Anthurium, yana ọkwa nke dị mkpa maka ya:
Ihe niile banyere Anthurium
Ntughari nke Anthurium